Umaki: stephen coley | Martech Zone
Umaki: stephen coley
Wake wafuna ukuhlela ikhasi noma ukuthumela ku-WordPress futhi wakhungatheka ngokungakwazi ukusesha nokuthola okuthunyelwe? Kuthiwani ngokwazi nje ukwengeza okuthunyelwe okusha kalula? Kuthiwani ngokwazi nje ukuthola ikhasi lokungena ngemvume kalula? DK New MediaUmthuthukisi omangalisayo, uStephen Coley, ekugcineni unikeze impendulo yokuthi wonke umsebenzisi we-WordPress uzofuna… Teleport. I-Teleport iyimenyu encane epholile yakho
Hey Valley Boys, Uyamkhumbula uChaCha?
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, i-2009 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 4, i-2009 Douglas Karr
Uma ubulokhu ufunda ibhulogi yami isikhathi eside, uzokwazi ukuthi umbono wami weChaCha ube nezikhathi ezinzima nezimbi. UChaCha manje useyiklayenti (kukhona engikudalulayo) ngakho-ke bengibheka ngokujulile… futhi kubukeka kukuhle. Ungathathi izwi lami ngakho! Wonke umphakathi wezobuchwepheshe, kubandakanya nabangaphakathi kwaTechCrunch (abafana abathanda ukuzonda uChaCha) noMashable (echo… echo…) bebengaboni ukuthi, ku
ULwesine, April 10, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Mina (nabanye) angikaze ngimuqonde kahle uChaCha. UChaCha uyiqhawe lasekhaya e-Indianapolis futhi uthole ithani loxhaso ngemuva kwalo. Bengingaqondi ukuthi kungani umuntu ephonsa imali enjini yokusesha enikwe amandla ngabantu. Bengicabanga ukuthi isisetshenziswa kakhulu futhi ukuchitha isikhathi… kuzomela ukufa kwamachashazi. Ngenze iphutha. UChaCha wenze into engimangazile. Babazi ukuthi yini ababenhle ngayo - ukusesha okunembile